Meelaha Hore - Kaararka Gawaarida, Aqoonsiga, iyo Hadalka
Meelaha hore: Dhaqdhaqaaqa iyo garashada
Goobaha hore waa mid ka mid ah afarta meelood ee ugu muhiimsan ama gobollada kortenska maskaxda . Waxay ku yaalaan xuduudaha kore ee xudunta maskaxda waxayna ku lug leeyihiin dhaqdhaqaaqa, go'aan qaadashada, xalinta dhibaatada, iyo qorsheynta.
Goobaha hore waxaa loo qaybin karaa laba qaybood oo waaweyn: kiliyaha hore iyo kaniisadda gawaarida . Kortehu wuxuu ku jiraa kortex bilawga iyo kortekaalka hoose.
Kortex doorreedka ayaa masuul ka ah shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed iyo qorsheynta dabeecadaha garashada ee adag. Goobta hore iyo mootooyinka hoose ee koontada gawaarida waxaa ku jira dareemayaasha xakameynaya fulinta muruqa ikhtiyaarka ah.
Gaar ahaan , xuubka hore ayaa ku yaala qaybta dambe ee kortenska maskaxda . Waxay si toos ah uga soo hor jeedaan lakabka lafdhabarka ah waxayna ka sarreysaa lakabyada ku meelgaarka ah . Xuubka dhexe, qoto dheer oo qotodheer, ayaa ka soocaya lakabada hore iyo lakabka hore.
Goobaha hore ee maskaxda ayaa ah nuucyada ugu weyn ee maskaxda waxayna ku lug leeyihiin hawlo badan oo jidhka ah oo ay ka mid yihiin:
Hawlaha Dalbashada Sare
Luqadda iyo Hadalka
Lafaha midigta ee dhinaca midig ayaa xakameynaya dhaqdhaqaaqa dhinaca bidix ee jirka iyo dhinaca bidixda bidix ee xakameysa dhaqdhaqaaqa dhinaca midig. Aagga maskaxda ee ku lug leh wax soo saarka luqadda iyo hadalka, oo loo yaqaano Broca , waxay ku taala dhinaca bidix ee bidixda.
Korteha hore waa qaybta hore ee xayndaabyada hore iyo waxay maamushaa nidaamka garashada garaadka sida xasuusta, qorsheynta, sababaynta, iyo xalinta dhibaatada. Meelahan xuddunta ah ee xarumaha hore waxay u shaqeyneysaa si ay nooga caawiso inaan dejinno oo aan u sii wadno yoolalka, xakameyn dareenka diidmada, abaabulida dhacdooyinka waqti go'an, iyo sameynta shakhsiyadeena shakhsi ahaaneed.
Kortekaalka koowaad ee muraayadaha horay loo soo galo ayaa ku lug leh dhaqdhaqaaqa iskaa ah. Waxay leedahay xiniinyaro ku xiran xadhigga laf-dhabarka , taas oo u suurtogelisa meeshan maskaxeed si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa muruqyada. Dhaqdhaqaaqyada meelo kala duwan oo jirka ka mid ah ayaa xakameynaya koontada hore ee mootada, oo leh aag kasta oo ku xiran gobol gaar ah oo koonfureed.
Qaybaha jirka ee u baahan xakamaynta mootada waxay ka qaadaan meelihii waawayn ee koontada, halka kuwa u baahan dhaqdhaqaaqyo sahlan ay qaadaan meel yar. Tusaale ahaan, goobaha koontada korontada ee xakameynaya dhaqdhaqaaqa wajiga, afka, iyo gacmahu waxay ka qaadaan meelo ka badan meelaha ay ku xiran yihiin miskaha iyo garbaha.
Kortekurafka hore ee xuubka hore ee xuubka waxaa ku jira xidhiidhada nudaha oo leh koontooyinka asaasiga ah, xudunta laf-dhabarta, iyo maskaxda . Cortexotor-ka wuxuu awood u siinayaa inaan qorsheyno oo sameynno dhaqdhaqaaq sax ah si aanu uga jawaabno calaamadaha dibadda. Gobolkan xudunta ayaa ka caawiya sidii loo ogaan lahaa jihada gaarka ah ee dhaqdhaqaaqa.
Dhaawac Laab Dhab ah
Waxyeellada xayndaabyada horay u soo baxa waxay keeni kartaa dhibaatooyin tiro badan sida luminta dhaqdhaqaaqa jilicsan, hadalka iyo luqadaha luuqada, dhibaatooyinka fekerka, awood la'aanta in la fahmo jilidda, maqnaanshaha wajiga, iyo isbedelka shakhsiyeed.
Dhibaatada lafaha ee hore waxay sidoo kale keeni kartaa waallida, dhibaatooyinka xusuusta, iyo la'aanta xakameynta kicinta.
Cortex Lobes badan
Muraayadaha Pear-ka : Muraayadahaan waxaa si toos ah loogu dhejiyaa xarumaha hore. Kortenka somatosensory waxaa laga helaa lakabyo dhinacyo kala duwan waxaana loola jeedaa si toos ah xagga koontada gawaarida ee xuubka hore. Noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'plexetal lobes' ayaa ku lug leh helista iyo samaynta macluumaadka dareenka.
Meelaha la gooyey : Dhabarradani waxay ku yaalaan dhabarka dambe ee dharka, oo ka hooseysa xarigaha lakabka. Nidaamka dheef-shiid kiimikaadka qallafsan ee macluumaadka muuqaalka.
Goobaha Ku- meelgaarka ah : Xayawaankani waxay si toos ah ugu yaryihiin lakabyada lakabka iyo geeska hore ee xarigaha hore. Goobaha ku meelgaarka ahi waxay ku lug leeyihiin hawlo badan oo ay ka mid yihiin hadalka, maqalka dhageysiga, fahamka luuqada, iyo jawaabaha dareenka.
Waa maxay miyirka?
Nidaamka Wadnaha (Cardiovascular System)
Intee in le'eg ayaad ku noolaan kartaa cunto, biyo, hurdo, ama hawo la'aan?
Sayniska Dhaqdhaqaaqa Bannaanka
Waa maxay Unugyada Neuroglia?
Shuruudaha Maaraynta Aagga iyo Jihada Jirka
Sidee Dhiigga Dhiigga Gaadiidka leh
Baro qiyaasta Thymus Gland
Daaweynta Qalabka Wadnaha: Aorta
Qeybta Diencephalon ee Maskaxda
Hordhac u noqoshada lab iyo dhedig
ALVAREZ Fasax Magaca Aasaasiga iyo Asalka
Madaxweynayaasha aan lahayn Heerarka Kulliyadda
Xeerarka iyo Nidaamyada Laliska
Salaadda Maalinta Xusuusta
Sida Loo iibsado Gawaarida Korontada ah
PGA Tour Rookies ee Sanadka
Dean Koontz liiska buugga
Qeexidda Maaddooyinka Maqalka
Madadaalada, Masraxa, iyo Muusikada Af Ingiriisi Vocabulary
Faransiiska Alphabet - Alphabet français
Boqol Isugeynta Macalimiintu waxay kudhiibaan tirinta, Qiimeeyaan, iyo Isku dhufashada
Fahminta Dadaalka Lidka ku ah Dhaqdhaqaaqa
William McKinley Xaqiiqooyin degdeg ah
Guurka oo ka soo horjeeda Lucy Stone iyo Henry Blackwell
Allan Pinkerton iyo Wakaaladiisa Dacwada
Toban Xaqiiqooyin ku saabsan Pedro de Alvarado
Magaca PATTERSON Name Meaning iyo Origin
Arnold Palmer oo ka tirsan Majaajiliistayaasha: Gumooladiisa iyo Ku dhawaad ​​Maqnaanshaha
Kitaabka Quduuska ah ee ku saabsan Jacaylka
Ku toosi Subax Badan Adigoo leh 10 Qodobbadeedka Sunshine
Aurora Borealis ama Northern Nights
Sidee Ayuu Yahay Waxyaabaha La Xiriira Macquulnimada?
Andres Escobar Murder
Muusikada ugu wanaagsan ee muusikada ee 1990-yadii